नेपाल हिरो गोल्डकपको उपविजेतामा सिमित ! | Hamro Khelkud
नेपाल हिरो गोल्डकपको उपविजेतामा सिमित !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोली भारतमा जारी हिरो गोल्डकपको उपविजेतामा समिति भएको छ । शुक्रबार भएको फाइनलमा नेपाल म्यानमारसँग ३-१ ले पराजित भयो ।
भारतको भुवनेश्वरस्थित कालिंगा रंगशालामा नेपालले खेलको ३५ औं मिनेटमा गोल खाएको थियो । म्यानमारका लागि यी यी ओले गोल गरेकी थिइन् । उनले पेनाल्टी क्षेत्रको दायाँ भागबाटआएको क्रसलाई अनमार्क रहेको अवस्थामा नियन्त्रण गरेर शक्तिशाली प्रहारमा गोल गरिन् ।
पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा नेपालका लागि मन्जलीकुमारी योन्जनले बराबरी गोल फर्काइन । गीता रानाको फ्रिकिकमा मन्जलीले पेनाल्टी क्षेत्रको बायाँ भागबाट गरेको भली प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो ।
पहिलो हाफमा नेपाललाई दबाबमा राखेपनि बराबरी खेलेको म्यानमारले दोस्रो हाफमा पनि दबाब कायम राख्यो । ५३ औं मिनेटमा म्यानमारका लागि विन थेंगी तुनले गोल गर्दै म्यानमारलाई पुन: अग्रता दिलाइन् । उनले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र चलाखीपूर्ण टर्न गर्दै डिफेन्स र गोलरक्षकलाई बिट गर्दै गोल गरिन् ।
म्यानमारले खेलको ६३ औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर पार्यो । यी यी ओले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टोलीलाई बलियो स्थितिमा पुर्याइन । उनले पेनाल्टी क्षेत्रबाहिरबाट गरेको प्रहारलाई नेपाली गोलरक्षक एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले बचाउन सकिनन् ।
प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा म्यानमारसँग ३-० ले पराजित भएको नेपालले त्यसपछि भारतलाई २-१ र इरानलाई ३-० ले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो । अर्को महिना विराटनगरमा हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाल पुगेको टोलीले प्रतियोगिता अवधिभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सफल रहयो ।